Ukuthola uthando lwakhe lobuciko nesiNtu sekumbeke kwelenyoni owuqweqwe lombhali nosomabhizinisi. Uxoxe noZIMBILI MAZIBUKO ngohambo lwakhe - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
USOMABHIZINISI ongumnikazi wendawo yokudlela edume umhlaba wonke iMax’s Lifestyle Village uMnu uMax Mqadi usinde ngokulambisa edutshulwa esanda kusuka kule ndawo eMlaza, eThekwini ngoLwesine ebusuku. Le ndawo eyaqokwa njengenye yezindawo zokudlela ezihamba phambili emhlabeni ivuliwe njengokujwayelekile. KwaMax’s ngenye yezindawo ezisetshenziswayo eThekwini ukudoba izivakashi. Ikhonzwe nangabahleli bemicimbi.
IKHOMISHINI yokuNcintisana isiphakamise ukuthi iSanlam Life ivunyelwe ukuthenga i-group risk business ye-Alexander Forbes ne-AF Life ngaphandle kwemibandela.
I-STANDARD Bank ithi isibalo sabantu abakhetha ukuba nama-virtual card sikhule ngamandla kusukela ngo-2020. Leli bhange lithi lesi sibalo sikhulu ngo-400% kunangonyaka odlule kanti lithe isibalo sabantu asebesebenzisa lolu hlobo lwamakhadi sesingu-24 000.
UMasipala waseThekwini uvule indawo yokusiza osomabhizinisi abancane, iSMME Helpdesk, ngokubambezeleka kwenkokhelo yabo. Abadinga usizo bangathumela ubufakazi ku: AccountsPay.statement@durban.gov.za, bashayele ku-031 322 7830 noma baye mathupha ku-127 Johannes Nkosi Street.
UKUDAYISA izimoto kunyuke ngo-12.4% ngo-Agasti uma kuqhathaniswa ngonyaka odlule. Izibalo zeStatistics South Africa zithi ukudayisa izimoto ezintsha kunyuke ngo-20.3%, kwathi okwezimoto ezisebenzisa uphethroli kwanyuka ngo-15.4%.
Ukulalelwa kwecala lokuthi kukhokhwe izinxephezelo kwabalahlekelwa ngenxa yokuwa kweSteinhoff kuzoqhubeka mhla ka-24 Januwari kuya kumhla ka-28 ngo-2022.
OBEBAMBE njengesikhulu esiphezulu eMgeni Water uNkk uNomalungelo Mkhize ushiyile kule nkampani ehlinzeka ngamanzi. Ibhodi iqoke uMnu uSandile Dube ukuthi abe yibamba lesikhulu esiphezulu.
UMasipala waseThekwini usuvule i-Human Capital Centre of Excellence (iHCCoE) eWarwick Junction. I-HCCoE izohlinzeka umphakathi ngamakhompyutha ne-wi-fi mahhala.
IKUMBA Iron Ore iqoke uNksz uMpumi Zikalala njengesikhulu esiphezulu. Okwamanje uyisikhulu seDe Beers Managed Operations. Uzoqala kulo msebenzi ngoJanuwari 2022 kanti ungena ezicathulweni zikaMnu uThemba Mkhwanazi. UMkhwanazi useqokwe njengesikhulu esiphezulu se-Anglo American Bulk Commodities.
INKAMPANI yomshwalense kahulumeni iSouth African Special Risk Insurance Association (iSasria) imemezele ukuthi isikhokhe ngaphezu kukaR5.8 billion ezinkampanini ezacekelwa phansi ngesikhathi kutatshwa KwaZulu-Natali naseGauteng ngoJulayi. Ithe izimisele ukuthi bese ibe isikhokhe u-80% wezicelo zemali ephakathi kukaR1 million noR30m ekupheleni kuka-Okthoba.
I-PUBLIC Investment Corporation isinyuse isabelo sayo kwiBidvest njengoba isino-20% wamasheya ale nkampani.
I-BIDVEST isiqoke uNksz uFaith Khanyile njengomunye wabaqondisi bebhodi layo. Uzoqala kulesi sikhundla ngoJanuwari ngonyaka ozayo.
AMAZULU asezophinde asebenzise iMoses Mabhida njengenkundla yasekhaya. Leli qembu eliholwa wusomabhizinisi uMnu uSandile Zungu lisayine isivumelwano seminyaka emithathu noMasipala waseThekwini. Loku kuzosiza ukugqugquzela ezemidlalo nezokuvakasha kuleli dolobha.
ABANTU abaqashiwe eNingizimu Afrika sebehle ngo-86 000 besuka ku-9.6 million ngoMashi bafinyelela ku-9.5 million ngoJuni. Izimboni ezibe neqhaza elikhulu ngezemisebenzi yomphakathi, ukukhiqiza impahla, ezokwakha nekagesi.
SEKUVULWE elinye ithuba lokulekelela osomabhizinisi abesembonini yezokuvakasha KwaZulu-Natali njengoba sezingafakwa futhi izicelo zokuxhaswa ngesikhwama iTourism Relief Fund. Lesi sikhwama esinoR20 million sisungulelwe ukusiza osomabhizinisi bale mboni abathwale kanzima ngenxa yokubheduka kweCOVID-19. Ukufakwa kwezicelo kuzovalwa mhla ka-29 Okthoba 29. Ngemininingwane, kungangenwa ku: www.zulu.org.za
UNGQONGQOSHE wezeziMali uMnu u-Enoch Godongwana uthe kumele kutholakale indlela yokugqugquzela amabhizinisi aseNingizimu Afrika ukuthi atshale imali kwingqalasizinda yezwe. Uthe ziningi izinkampani zakuleli zwe ezilondoloze imali ebhange kodwa ezimanqikanqika ukuyitshala
UMENGAMELI uCyril Ramaphosa wehlisele ukuvalwa kwezwe esigabeni sokuqala kusukela namhlanje. Loku kuvumela ukuthi abantu ababuthene endaweni evalakile bangakhuphuka babe wu-750, kuthi phandle babe wu-2000. Isibalo sabantu emingcwabeni sesinganyukela ku-100 kanti ukudayiswa kotshwala sekubuyele ezikhathini ezejwayelekile.
INKAMPANI eyengamele ugesi eNingizimu Afrika, iNational Energy Regulator of South Africa (iNERSA) isiqoke u-Adv Nomalanga Sithole njengesikhulu esiphezulu esisha. U-Adv uSithole unamava eminyaka ewu-24 embonini yokulawula ugesi.
I-RBM imemezele ukuthi isiyitholile imvume yokuqhubeka nohlelo lokuthuthukisa umphakathi, iSocial and Labour Plan (iSLP3) emNyangweni wezokuMbiwa Phansi namaNdla. Ithe izosebenzisa uR249 million ngaphansi kweMine Community Development, okuwuhlelo lweminyaka eyisihlanu, u-2020 kuya ngo-2024. Imiphakathi ezohlomula yiKwaSokhulu, KwaDube, KwaMkhwanazi naKwaMbonambi.
I-GRINDROD imemezele ukuthi iyawadayisa onke amasheya enawo eGrindrod Shipping ngoR368.2 million. Le nkampani ithe loku kuhambisana nezinhlelo zayo zokuphuma kulezo zimboni okungesizo eziwumongo webhizinisi layo.
INKAMPANI yezempilo nobuhle iClicks isiqoke uNksz uBertina Engelbrecht njengesikhulu esiphezulu esisha. Uzothatha izintambo kuMnu uVikesh Ramsunder ngoJanuwari 2022. UNksz u-Engelbretch wafika kule nkampani ngo-2006 ezoba wumqondisi wakwandabazabantu ngaphambi kokuqokwa njenge-executive director ngo-2008.
IKhomishini yokuNcintisana isiphakamise ukuthi iCompetition Tribunal ayigunyaze ukuthi iDis-Chem ithenge iPPH, nayo eyinkampani yezempilo nenamakhemisi. Nokho kunemibandela ethile ezoyibeka. Le khomishini ithe nakuba loku kuzothinta ukuncintisana kodwa ithe ayikholwa ukuthi kuzoba kukhulu kangako. Le khomishini igunyaze nokuthi i-Altron ithenge iLaw Trust nokuthi iGrowthPoint Properties ithenge iJoburg Stay Proprietary
UMnu uBongani Mavuso, umsunguli weMavuso Verse Entertainment neKaMavuso Publishing
Inkunz' emidwayidwa Izindaba
Ukuthola uthando lwakhe lobuciko nesiNtu sekumbeke kwelenyoni owuqweqwe lombhali nosomabhizinisi. Uxoxe noZIMBILI MAZIBUKO ngohambo lwakhe
UTHANDO ngomlando wabantu base-Afrika nobuciko sekumvulele iminyango eminingi namathuba ebhizinisi umbhali, usomabhizinisi nentatheli esimnkantshubomvu.
UMnu uBongani Mavuso, oneminyaka ewu-45 waseDumbe, eNyakatho neKwaZulu-Natali, uwumnikazi weMavuso Verse Entertainment, imbongi, umbhali wezincwadi nomdidiyeli wezindaba eSABC eThekwini, KwaZulu-Natali.
“Ngizalwe, ngakhulela eDumbe emndenini wabantu abebevele bezisebenza, kusukela kumkhulu nomalume,” kulanda yena.
Ekhumbula ngesikhathi esanda kuvula inkampani yakhe, uMavuso uthi wayengenalo ulwazi oluningi kodwa wasizwa wukubuza kwababenolwazi ukuze achushiseke. Eqala ukuhlanganisa uhlaka lwesicelo sokuthola umsebenzi, phecelezi i-proposal, wabheka kwi-internet ukuluhlanganisa.
Uthi iphupho lakhe liqale ukufezeka ngo-2005 ngesikhathi ethola ithuba lokusebenza nomNyango wezamaSiko namaCiko. Wathola nethuba lokwenza uhlelo i-Back to My Roots emsakazweni Ukhozi FM.
“Ngikhumbula siqala uhlelo noDudu Khoza emsakazweni, lapho i-Back to My roots yayibheka (izimbongi ezisafufusa). (Izimbongi sasizinikeza) ithuba lokuhaya izinkondlo (zazo) nokuthi ngizifunde bukhoma emoyeni zilalelwe ngabanye abantu abathanda ukubhala nokuhaya izinkondlo,” kukhumbula yena.
UMavuso akagcini ngokuba wumahlabana ngosiba, nombhobho uyamvuma
Ziningi izimbongi ezithekele ulwazi kuMavuso kule minyaka ekule ndima. Usendlondlobele ngekhono lakhe lokubhala njengoba esebhale izincwadi eziwu-13 uma kuhlanganiswa nalezo azibhale ngokuhlanganyela nabanye ababhali.
“Ngiyaziqhenya kakhulu ngomsebenzi esengiwenzile kule minyaka ngaqala ukubhala. Kunencwadi yami esihloko sayo sithi Inhlansi. Njengamanje ifundwa ezikoleni ezizimele okuyi-Clifton College, iThomas More College neCrawford College. Loku nje kukodwa kusho enkulu impumelelo kimina… ukuthi umsebenzi wami ufundwe yizingane zebala elimhlophe, zifundiswa ulimi lwesiZulu.
“Enye incwadi yami Izintombi ZeNgcuce yona ifundwe iminyaka emine esikhungweni semfundo ephakeme i-Unisa. Kuyangithokozisa uma umsebenzi wami usabalala ngale ndlela,” kusho uMavuso ngeqholo.
UMavuso unenkampani eshicilela izincwadi iKaMavuso Publishing. Kukhona nencwadi yesiNgisi ayibhalile esihloko sithi Undying Spirit of a Dead Man neyezingane uThemba neNja Yakhe neqoqo lezindaba ezimfishane ethi Umgoqo woMendo.
Ezinye zezincwadi zeKaMavuso Publishing
Uthi uma ebhala ugxila kakhulu kwizinselelo zabaholi base-Afrika nasemlandweni wayo. “Into emqoka nje uma ubhala inkondlo wukuthi, funa ulwazi. Ungabhali into engekho, ongazange wenze ucwaningo lwayo nangomlando wayo. Yinto lena engiye ngiyikhuthaze kubabhali bezinkondlo abasakhula ukuthi bangabhali ngento abangawubhekanga umlando wayo,” kweluleka uMavuso,
Uqale ukusebenza e-Alex FM eGoli, nokuyilapho athi waqaphela khona uthando lwakhe lobuciko futhi wanquma ngaleso sikhathi ukuthi ufisa ukuzimela futhi aluthuthukise.
“Ngonyaka ozayo ngizokhipha i-albhamu yami ethi Isithunzi Somuntu Omnyama, okuyiyona okwamanje engimatasa ngayo njengoba ngiyihlanganisa. Sekusele izinyanga ezimbalwa bese ngiyaqeda, iphume.”
Nokho u-2020 ube nzima kuMavuso njengoba eke wahlatshwa wukugula. Kwatholakala ukuthi unesifo sezinso. “Ngatshelwa ukuthi ngiku-stage 5 wesifo sezinso. Kodwa ngiyambonga uMdali ngokungihlenga.
“Ngiyafisa kakhulu nokuthi kweminye imisebenzi yami ngifundise abantu ngalesi sifo ukuze baqonde ngaso nezinto okumele bazigweme. Kuningi okusamele sikufunde siyisizwe esinsundu ngezempilo ngoba nezinselelo ziningi kakhulu, ikakhulukazi ezikhungweni zikahulumeni zezempilo,” kusho yena.
Esinye sezifiso zikaMavuso wukuhlonipha izingcithabuchopho zaseNingizimu Afrika ezifana noSolwazi uSibusiso Nyembezi amfanisa nengwazi yombhali weNgisi uWilliam Shakespeare ngokwemisebenzi yakhe.
Uneziqu zeCommunication Science zase-University of Zululand;
Ngo-2020 uthole i-Journalism Award njengombhali kumaSouth African Literacy Awards;
Useke wahlonishwa womasipala abahlukene ngomsebenzi wakhe, okubalwa nowangakubo eDumbe;
Usebenze namaTVET Colleges awu-11 ecobelela abafundi ngokubhala izinkondlo nezincwadi;
Unohlelo lwengxoxo alwethula kwiYouTube iBongani Mavuso TV kanti omunye wosaziwayo aseke waxoxa nabo wumsunguli we-IFP Inkosi uMangosuthu Buthelezi.
Ushintshe endleleni ebona ithuba elisha osenenkampani ekhiqiza ushizi. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA
October 11, 2021 Funda kabanzi
October 4, 2021 Funda kabanzi
September 27, 2021 Funda kabanzi
September 20, 2021 Funda kabanzi
September 13, 2021 Funda kabanzi
September 6, 2021 Funda kabanzi